Haweenay macaash ka samaynaysa sawir ay la gashay boqortooyada Britain - BBC News Somali
Haweenay macaash ka samaynaysa sawir ay la gashay boqortooyada Britain
Boggaga hore ee wargeysyada Britain Qaarkood
Haweenay u dhalatay dalka Britain oo lagu magacaabo Karen Murdoch, oo 39 ah, ayaa sawir la gashay amiirka boqortooyada Britain Harry iyo gabadha uu calmaday ee uu guursan rabo Meghan Markle, kadibna waxa ay sawirkii soo dhigtay boggeeda Twitter-ka.
Hase yeeshee saacado kadib sawirka ayaa kusoo baxay bogaga hore ee wargeysyada Britain kuwooda ugu waaweyn sida Sun, Daily Mail, Mirror, Star, Daily Telegraph iyo Express.
Sawirka oo ay ka muuqdaan lamaanaha boqortooyada iyo iyada oo dhoolo cadaynaya ayaa waxa uu noqday kii loogu faafinta badnaa ee hawenayday ay ebed dhigtay Twitter-ka. Kumanaan jeer ayaa dib loo faafiyay.
Xus loo samaynayo geeridii Diana 20 sano kadib
Maxkamad sare ee Britain ayaa diiday habka looga baxayo Yurub
Warbaahinta Britain oo dhan ayaa hadda haweenaydan ka dalbanaysa in ay sawirka isticmaalaan, maadaamaa ay ku qaaday taleefoonkeeda, iyaduna leedahay xuquuqdiisa, waxayna Karen sheegtay in ay hadda iibinayso sawirka, waxayna wakiil ahaan u qabsatay shirkad sawirrada ka ganacsata, taas oo iibinaysa sawirka.
Xigashada Sawirka, KAREN MURDOCH
"Waxaan rabaa in aan meel lacag u dhigo jaamacadda gabadhayda, fursadaasna waan heystaa" ayay tiri Karen.
Sawirka oo ah mid la qaaday maalinta ciidda masiixiga biloowgeeda ayaa lagu tilmaamay in uu yahay mid ay ku riyoodaan sawir qaadayaasha xirfadyahanada ah, waxaana intaas lagu daray in tayada sawirka iyo munaasabadda ay aad isugu habboonyihiin.
Karen waxa ay sheegtay in ay aad ula yaabtay falcelinta ka dhalatay sawirka.